Nnweta B2B: Nweta ndepụta ndị ọzọ maka ego gị | Martech Zone
Nnweta B2B: Nweta ndepụta ndị ọzọ maka ego gị
Tuesday, August 29, 2006 Tuesday, August 29, 2006 Douglas Karr
Inweta azụmaahịa azụmaahịa nwere ike ịbụ nnukwu ụjọ. Ọ bụrụ na ị bụ nzukọ na-arụ ọrụ nnukwu mpaghara nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọrụ, ịchọrọ ijide n'aka na atụmatụ nnweta gị dị mma. Ọ bụrụ na enwere azụmahịa 50,000 na mpaghara ahụ, ka anyị were ya na ị nwere ike ịkpọtụrụ atụmanya 25 kwa izu, ma ọ bụ 5 kwa ụbọchị. Nke a ga - achọ ka inwe ndị ahịa iri abụọ. Nke ahụ dị mma ike ike maka otu ndị ahịa na telemarketing na ohere ọ nwere bụ na ịnweghị nnukwu ahịa ahụ!
Gịnị ma ọ bụrụ na ị ga - enwe ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ 5,000 (1 na 10)? Kedu ka ị ga - esi chọta ma lekwasị anya azụmaahịa ndị ahụ? Azịza ya dị na ụfọdụ usoro usoro nchekwa data nchekwa dị mfe etinyere azụmaahịa azụmaahịa. Enyere m nyocha a ihe karịrị otu afọ gara aga na ụlọ ọrụ mpaghara, ma ugbu a anyị mechara afọ nke abụọ anyị na-atụ anya maka ha. Ọ bụghị sayensị roket, ọ na-atụ anya na ụlọ ọrụ ndị dabara na njikwa nke ndị ahịa gị.
Kwụpụ 1: Nkọwapụta azụmahịa gị. Nke a bụ ọrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ data ga-enye gị n'ọnụ ahịa dị ala. InfoUSA, Dun na Bradstreet na AccuData bụ ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a. Ozugbo ị natara akụkọ ahụ, ọ dị mkpa iji nyochaa na chịkọta ha n'ime data bara uru. Nke a bụ ihe atụ (Pịa iji lee):
Afọ na azụmahịa site na ụlọ ọrụ - Penetration%:
Mpịakọta Azụmaahịa Ahịa site na Mmepụta - Penetration%:
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ site na ụlọ ọrụ - Penetration%:
Kwụpụ 2: Nyochaa Nsonaazụ
Penetration bụ pasent nke ndị ahịa na mpaghara ahụ nke ị jiri tụnyere pasent pasent nke atụmanya na mpaghara ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na ndị ahịa 25% nọ na-azụ ahịa ihe na-erughị otu afọ, mana naanị 10% nke azụmaahịa mpaghara na-azụ ahịa ihe na-erughị otu afọ, mgbe ahụ ị ga-aka azụ ahịa ọhụrụ! Site n'ime nke a, ị na - enwewanye ohere ịchọta atụmanya karịa ile ụlọ ọrụ na - anaghị atụnyere.
Ihe ngosi doro anya nke ma ị nwere ike ime ihe na data ahụ bụ naanị ilele ọdịdị nke akụkụ na mmekọrịta dị n'ime ụlọ ọrụ. Nke a bụ ụfọdụ ihe izugbe (mkpụrụ osisi kwụ ọtọ) site na chaatị dị n'elu:
Ọnụ ọgụgụ nke afọ na azụmahịa: Rịba ama ma G & H nwere ọnụ ọgụgụ dị elu na afọ mbụ ma ọ bụ obere? M ga-emikpu miri emi n'ime ụlọ ọrụ ndị a ma nwee ike itinye ego na ndepụta atụmatụ atụmanya ọhụụ.
Mpịakọta Ahịa: Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebili ma na-adaba na usoro dị mma, rịba ama etu mgbidi si arị elu? Ya mere,… Ibu nnukwu ụlọ ọrụ ahụ, nke ka mma!
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ: Rịba ama ka ụlọ ọrụ ọrụ si dị larịị? Nke ahụ na-agwa m na ọnụọgụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị abụ isi na ụlọ ọrụ ahụ.
Kwụpụ 3: Tinye nchoputa
Ọ bụrụ na m chọrọ ịdị umengwụ na ngwa ngwa, achọrọ m ịnye ụlọ ọrụ data m ihe kachasị elu nke akụkụ m ma jiri ndị ahụ dịkarịa ala maka ịtụ anya atụmanya n'ime ụlọ ọrụ ọ bụla. Companieslọ ọrụ data anaghị akwụ gị ụgwọ maka ịme ụfọdụ mgbagwoju anya banyere data iji wee nwee ndepụta gị ka ị ghara ime ihere, jụọ! Farzọ kachasị mma iji mee ya bụ ịzụlite ụfọdụ algọridim na-adabere na profaịlụ, wee tinye usoro ahụ na atụmanya iji nweta akara ngosi maka atụmanya. Nanị ịtụ atụmanya gị n'usoro dị ala, wee bido inweta ya!
Kwụpụ 4: Igbu!
Mgbe anyị mere mkpọsa ndị a maka onye ahịa anyị, anyị nyochara ihe ha si enweta maka ịkpọtụrụ atụmanya. Ghọta ọtụtụ atụmanya ha nwere ike ịkpọtụrụ nyere anyị ọnụ ọgụgụ dị mkpa iji belata ndepụta aha ha. Anyị mere mgbalị 3-prong nke rụpụtara ịrị elu 10% na nnweta!
Kwụpụ 5: Nyochaa nsonaazụ ọhụrụ wee bido ọzọ
Ihe odida obodo gbanwere dị ka àgwà nke ndị ahịa gị. Ọ dị mkpa ịga n'ihu na-eme ka algorithms na atụmanya gị dị mma ma dozie ya.
Ikpeazụ kwuru: Enwere akwụkwọ niile edere na usoro ahịa nchekwa data. O siri ike ikwupụta usoro ịzụ ahịa nchekwa data dị mgbagwoju anya na ntinye akwụkwọ ntanetị, yabụ ejirila m nnwere onwe nke ịme ọtụtụ echiche ma were ọtụtụ ụzọ mkpirisi. Usoro nke anyị mere ka onye ahịa a were were ọnwa ole na ole. Anyị chọpụtara ma dakọtara na 95% nke ndị ahịa ha azụ Dun na Bradstreet data iji nweta profaịlụ pụtara ìhè. Mgbe anyị họọrọ atụmanya ikpeazụ anyị, anyị wepụrụ ndị ahịa ha ugbu a na ndị na-emecha ka ọ gwụ.
Naanị m chọrọ ịkọ na enwere nyocha dịtụ mfe ma dị oke mkpa ị nwere ike ime site na mpempe akwụkwọ Excel nke ga-eme ka azụmahịa gị ka mma maka mbọ ịchọta azụmahịa!
Gore kwuru banyere mgbanwe mgbasa ozi Media
Aug 29, 2006 na 7:56 PM
Echere m na nke a bụ ezigbo aka post. Na ahụmịhe m, ọtụtụ ndị nwere obere azụmaahịa anaghị enyocha ihe a nke ọma na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nyocha ahịa na ihe ndị ọzọ. Mana (doro anya) ime nke a nwere ike ịba uru site n'inyere azụmaahịa ndị a na-eduzi mbọ ha na atụmanya kachasị mma. Daalụ maka Ama ahụ!